KWỤSỊ NGWA NA-AGBA ỌSỌ NA NDABERE NA WINDOWS 10 - ADỤ
Kwụsị ngwa na-agba ọsọ na ndabere na Windows 10
Gị Windows OS na-ahapụ ụfọdụ ngwa na usoro na-agba ọsọ na ndabere, na-enweghị ọbụna na-emetụ ngwa. Gị Sistemụ nrụọrụ eme nke a iji melite arụmọrụ sistemụ. Enwere ọtụtụ ngwa dị otú ahụ, ha na-agba ọsọ n’amaghị ama gị. Ọ bụ ezie na atụmatụ a nke OS gị nwere ike ịdị mma maka arụmọrụ sistemụ gị ma debe ngwa gị ka ọ dị ọhụrụ, mana enwere ike ịnwe ụfọdụ ngwa ndị ị na-achọghị n'ezie. Ndị a ngwa ọdịnala na-anọdụ na ndabere, na-eri ihe niile ngwaọrụ gị batrị na ndị ọzọ na usoro ego. Ọzọkwa, ịgbanyụ ngwa ngwa ndị a nwere ike ime ka usoro ahụ rụọ ọrụ ngwa ngwa. Ugbu a bụ ihe ị chọrọ n'ezie. Gbanyụọ ngwa site na mgbagharị n'okirikiri ga-apụta na mgbe ịmechara ngwa ahụ, usoro niile metụtara ya ga-akwụsị ruo mgbe ị megharịrị ya. Ndị a bụ ụzọ ole na ole ị nwere ike iji kwụsị ole na ole ma ọ bụ ngwa niile sitere na ndabere.
# 1. Ọ bụrụ n ’ịchọrọ ịkwụsị ngwa ngwa dị iche
# 2. Ọ bụrụ n ’ịchọrọ ịkwụsị ngwa ngwa niile
# 3. Gbanyụọ Desktọpụ Ngwaọrụ na ịgba ọsọ na ndabere
Ghara ndabere ngwa nwere ike ịchekwa gị ọtụtụ batrị ma nwee ike ịkwalite ọsọ sistemụ gị. Nke a na-enye gị ihe zuru oke iji gbanyụọ ngwa ọdịnala. Ihe njide ebe a bụ na ịnweghị ike iwepu ngwa ọ bụla na-enweghị isi na-enweghị isi na ndabere. Appsfọdụ ngwa ọdịnala kwesịrị ịnọgide na-agba ọsọ na ndabere iji rụọ ọrụ ha. Dịka ọmụmaatụ, ngwa na-agwa gị gbasara ozi ọhụụ ma ọ bụ ozi ịntanetị agaghị eziga ozi ma ọ bụrụ na ị gbanyụọ ya na ndabere. Ya mere, ị ga-ejide n'aka na ngwa ma ọ bụ usoro sistemu gị ma ọ bụ arụmọrụ anaghị egbochi ya ịme ya.
Ugbu a, were ya na ị nwere ngwa ole na ole ị chọrọ iji gbanyụọ site na ndabere ka ị na-echekwa ihe ndị ọzọ, ị nwere ike ịme ya site na iji ntọala nzuzo. Soro usoro ndị enyere:
1. Pịa na Malite akara ngosi na ogwe osisi gi.
2. Wee pịa na akara ngosi gia n'elu ya imeghe Ntọala.
iTunes enweghị ike ijikọ 0xe80000a
3. Site na windo ntọala, pịa na Nzuzo akara ngosi
4. Họrọ ‘ Ndabere ngwa ’Site n’aka ekpe.
5. will ga-ahụ ‘ Ka ngwa ọdịnala na-agba ọsọ na ndabere 'Toggle, gbaa mbọ ka gbanye ya.
6. Ugbu a, na ‘ Họrọ ngwa ndị nwere ike ịgba ọsọ na ndabere Ndepụta, gbanyụọ toggle switch maka ngwa ahụ ịchọrọ igbochi.
7. Otú ọ dị, ọ bụrụ na n'ihi ihe ụfọdụ, ị chọrọ igbochi ọ bụla ngwa si na-agba ọsọ na ndabere, gbanyụọ '' Ka ngwa ọdịnala na-agba ọsọ na ndabere '.
akara ngosi Bluetooth na-efu site na etiti ihe
Nke a bụ otu ị ga-esi kwụsị ngwa ngwa na-agba ọsọ na ndabere na Windows 10 mana ọ bụrụ na ị na-achọ usoro ọzọ, mgbe ahụ echegbula, soro usoro na-esote.
Gịnị ka ị na-eme mgbe gị usoro na-agba ọsọ nke batrị? Gbanwuo nchekwa batrị , nri? Ihe nchekwa batrị na-echekwa batrị site na nsị ngwa ngwa site na iwepu ngwa ngwa na-agba ọsọ na ndabere (belụsọ ma enyere ya ohere). Nwere ike iji akụkụ a nke batrị nchekwa iji kwụsị niile ndabere ngwa ngwa. Ọzọkwa, na-enyere ndabere ngwa ọzọ ga-abụ siri ike kwa.
Ọ bụ ezie na ọnọdụ nchekwa batrị na-agbanye na akpaghị aka mgbe batrị gị dara n'okpuru pasent akọwapụtara, nke na ndabara bụ 20%, ị nwere ike ikpebi ịgbanye ya aka mgbe ọ bụla ịchọrọ. Iji gbanye ọnọdụ nchekwa batrị,
1. Pịa na akara ngosi batrị na ogwe ọrụ gị wee họrọ ‘ nchekwa batrị '.
2. Maka ụdị ọzọ dị ọhụrụ nke Windows 10, ị nwere nhọrọ ịtọ ndụ batrị na arụmọrụ kacha mma mgbanwegharị. Iji mee ka ọnọdụ nchekwa batrị, pịa akara ngosi batrị na ogwe osisi gi ma dọrọ ' Ọnọdụ ike 'Mmịfe ya aka ekpe.
3. zọ ọzọ gbanye ọnọdụ nchekwa batrị sitere na akara ngosi ngosi na taskbar. Na Lọ Ọrụ (Windows Key + A) , ị nwere ike pịa ozugbo na ' Ihe nchekwa batrị ’Bọtịnụ.
njehie dị oke mkpa menu mmalite gị anaghị arụ ọrụ
Wayzọ ọzọ nke na-enyere batrị nchekwa bụ site na ntọala.
Mepee ntọala wee gaa ' Sistemụ '.
Họrọ batrị n'aka ekpe.
Gbanwuo ' Batrị nchekwa ọnọdụ ruo mgbe ọzọ ụgwọ 'Toggle mgba ọkụ iji mee ka batrị nchekwa mode.
Ụzọ a, niile ndabere ngwa ga-nanị.
Abovezọ ndị a dị n'elu anaghị arụ ọrụ maka ngwa na Desktọpụ (ndị a na-ebudata na orntanetị ma ọ bụ ụfọdụ mgbasa ozi ma malite iji ya .EXE ma ọ bụ .DLL faịlụ ). Ngwa desktọọpụ desktọọpụ agaghị apụta na ndepụta gị 'Họrọ nke ngwa nwere ike ịgba ọsọ na ndabere' ma 'ntọala ahụ ga-agba ọsọ na ndabere' anaghị emetụta ya. Iji kwe ma ọ bụ gbochie ngwa desktọọpụ, ị ga-eji ntọala na ngwa ndị ahụ. Will ga-emechi ngwa ndị ahụ mgbe ị naghị eji ha ma hụkwa imechi ha na sistemụ sistemụ gị. You pụrụ ime otú ahụ site na
1. Pịa na elu akụ gị ngosi ebe.
2. Pịa aka nri na akara ngosi akara sistemụ ọ bụla na wepu ya.
Fọdụ ngwa na-akpaghị aka na-ebubata mgbe ị banyere. Iji kwụsị ngwa ọ bụla ịme otú ahụ,
1. Pịa aka nri na ogwe ọrụ gị wee họrọ ' Nchịkọta Ọrụ ’Site na menu.
2. Gbanwee na ' Malite ’Taabụ.
3. Họrọ ngwa ị chọrọ ịkwụsị site na ịmalite na akpaghị aka wee pịa ‘ Gbanyụọ '.
Ndị a bụ ụzọ ị nwere ike iji gbanyụọ ụfọdụ ma ọ bụ ngwa niile na-agba ọsọ na ndabere iji bulie ndụ batrị na ọsọ sistemụ.
Wzọ 4 iji lelee Paswọdu WiFi echekwara na Windows 10
Top 6 Best Photo edezi égwu maka Windows 10?
Idozi Mgbachi Mkpọchi greyed ke Windows 10
Idozi 'Ọ dịghị internet, nwetara' WiFi njehie
Enwere m olileanya na isiokwu a nyere aka ma ugbu a ị nwere ike ọfụma Kwụsị ngwa na-agba ọsọ na ndabere na Windows 10 , ma ọ bụrụ na ị ka nwere ajụjụ ọ bụla gbasara nkuzi a wee nweere onwe gị ịjụ ha na ngalaba nkọwa.
esi edozi ndenye anaghị akwado na egwuregwu
gịnị ka ọ pụtara mgbe onye nbipute nọ na njehie
Nri ehihie gbara ọchịchịrị
mee windo hibernate ka 10 cmd
tụgharịa windo ikpeazụ windo 10 melite
radeon settings host host akwụsịla ịrụ ọrụ